ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ဥာဉ် (၂)
ကိုသန်းမောင် ဖြင့် ခင်သက်ဝေကို မျက်စိထဲ ကြည့်ကောင်း သော် လည်း ဆံပင်မွှေးစူး ဆိုသလို ဖြစ်ဖြစ်လာ သည်။ ထွန်းလွင်ကလည်း မမသက်ဝေ မမသက်ဝေနဲ့ ပါးစပ်ဖျားက မချ။ ထမင်းဖိတ်ကြွေးလို့ သွားစားလိုက်၊ အဖျော်လေး လုပ်လို့ သွားသောက်လိုက်နှင့် ခင်သက် ဝေ တို့ အိမ်ကို ချောင်းပင်ပေါက်တော့မည်။
အရင်က လမ်းတွင်တွေ့ လို့ မှ မမြင်ဟန်ပြုလျှက် မျက်နှာ လွှဲလွှဲ သွားတတ်သော ခင်သက်ဝေပင် သူ့ ကိုလော ကွတ်တွေ လုပ်လုပ်လို့ လာပြီ။ ထွန်းလွင်နှင့် ခင်သက်ဝေ ခရီးအတော်ရောက်နေပြီဟု ကို သန်းမောင် ထင်လိုက် မိသည်။ သူ့ တူလေး ဒီအပျိုကြီးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား လို့ လည်း ပူနေမိသည်။ ခက်ပါရဲ့ ငါနဲ့ သာ ဖြစ်လိုက် ချင် တယ် လို့လည်း ခဏခဏ တွေးနေမိသည်။
အရပ်ထဲကပင် ခင်သက်ဝေနှင့် ထွန်းလွင်ကို သမုတ်စပြုလာပြီ။ အပျိုကြီး ခင်သက်ဝေတစ်ယောက် ထွန်းလွင် လေးကို ချိုင်နေပြီဟု ကြားလိုက်ရရင် ကိုသန်းမောင် ရင်ထဲ ပူပူကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ အစ်မလုပ်သူကလည်း တစ်ခုခုဖြစ်လို့ က နင်ပဲဟု ပြောနေပြန်သေးသည်။ တကယ်တော့ ကိုသန်းမောင် ကအနေသာကြီးပင်။ အဲဒီ မနူးမနပ်နဲ့ ကောင်သာ ခင်သက်ဝေမှိုင်းမိ နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မချိတင်ကဲ ဖြစ်နေမိသည်။
ထွန်းလွင်ကြည့်တော့လည်း ခါတိုင်းလိုပင် အနေမပျက် အစားမပျက်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျန်ခဲ့ သောလက သူ့ သူ ငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ တွင်ထွန်းလွင် အလုပ်ရသွားသဖြင့် သူအနည်းငယ်စိတ်အေးသွားသည်။ ကြားရက် သူ အလုပ် ဆင်းချိန်၊ မမကြီးကလည်း ဈေးသွားချိန်ဆို ထွန်းလွင်တစ်ယောက်သာ အိပ်ကျန်ကျန် နေခဲ့ သည်ကို သူ့ စိတ်ထဲ ပူနေမိသည်။ ထွန်းလွင်က မိန်းကလေး မှမဟုတ်တာ ပူစရာမှမလိုပဲ ဟုတွေးသော်လည်း သူ ပူမြဲသာပူနေမိ သည်။
သို့ နှင့် ထွန်းလွင် အလုပ်ရသွားသည်မှာ သုံးလေးလရှိခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ အတူ သူ့ စိတ်ထဲပူနေသော အရာကြီး ကလည်း သုံးလထဲပင် ရောက်လာခဲ့ ပြီတည်း။ ကိုသန်းမောင်သည် ညကအိမ်ပြန်မအိပ်သော တူအတွက် အစ်မ နှင့်အတူ စိတ်ပူနေရသည်။ ထွန်းလွင် သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝကတည်းက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအ သင်းနှင့်ပင် ညအိပ်ညနေ အလည်မလွန်တတ်ပေ။ ဘာရယ်ကြောင့်များ ထွန်းလွင်တစ်ယောက် ညက အိမ်ပြန်မ အိပ်လေသနည်း။
အလုပ်မှာများ အချိန်ပိုဆင်းနေသလား မပြောတတ်။ သို့ ဆိုလည်း ဖုန်းလေးတော့ ဆက်မည်သာဖြစ်သည်။ ခုမိုး လင်း၍ နေတောင် အတော်မြင့်နေပြီ။ အစ်မကို သူ ကပဲဈေးသွားကြိုရသည်။ စနေနေ့ ကြီးဖြစ်နေလို့ သာတော် ရော့သည်။ အစ်မဈေးသိမ်းပြီး အပြန်ကျမှ ထွန်းလွင် အိမ်ရှေ့ တွင် မတ်တပ်ရပ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည်။ စီးပြီး ငေါက်လိုက်မည်ဟု ပြင်လိုက်သော်လည်း ထွန်းလွင်လက်ထဲ အိတ်ကတစ်လုံး၊ မိန်းကလေးကတစ်ယောက် ဘယ်ညာလက်နှစ်ဖက် မအား အောင် ဆွဲထားလေတော့ ကိုသန်းမောင် ဘာမျှပင်မမေးအားပဲ ခြံတံခါးသော့ဖွင့် ပေးပြီး နှစ်ယောက်သားကို အိမ်ထဲ အဆွဲကလေး ခေါ်လာရသည်။
မမကြီးပြန်လာလျှင်တော့ ယမ်းပုံပဲမီးကျမလား အော်ဟစ်ပြီးပဲငိုမလား မပြောတတ်။ ကိုတော်ချောကတော့ မိန်း မ ခိုးလာပြီးကိုး ဟုစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းတွင် အသာဝင်ထိုင်လိုက်ရသည်။ ထွန်းလွင်ကတော့ ခပ်တည်တည် ပင် ကျွန်တော်တော့ ခိုးလာပြီ။ လေးသန်း ကြည့်သာလုပ်တော့ ဆိုသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် ကောင်မလေးကို ဘေးထား ကာ ထိုင်နေသည်။ ကိုသန်းမောင်တော့ သူ့ ကို အရိပ်အမြွက်ကလေးတောင် မပြောရကောင်းလားဖြင့် ဒေါထ လျက် မျက်နှာကြီးသုန်မှုန် ထားလိုက်သည်။
ကောင်မလေးက အလှကလေး။ နောက် ထွန်းလွင်လို ပင်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးက ရှက်လို့ရယ်ထင်သည် မျက်နှာကလေး အောက်ချကာ ထွန်းလွင်လက်ကို သာ အတင်းဆုပ်ထားသည်။ ကိုသန်းမောင် ပါးစပ်ပြင်နေပေမယ့် ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ ငယ်ငယ် ကသူငယ်ချင်းတွေ မိန်းမခိုးတုန်းက ပါရမီတွေ ဖြည့်ခဲ့ ပေမယ့် ခုလို ကိုယ့်သွေးကိုယ်သားက လုပ်လာတော့ နည်းနည်း ခေါင်းနားပန်း ကြီးနေမိသည်။
“ကဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲကွာ၊ မင်းအမေက တစ်ညလုံး အိပ်တောင်မအိပ်နိုင်ဘူး။ ပြောစမ်းပါဦး ဒီက ကလေးမ က…..”
“ဒါ ကျွန်တော့ ရည်းစား။ ကျောင်းထဲက ကြိုက်လာတာ သူ့ အိမ်က ယောက်ျားပေးစားတော့မှာ ဆိုလို့ကျွန် တော်လည်း ခိုးလာတာ တစ်ခါတည်း။ လေးသန်း အမေ့ကို ကြည့်ပြောပေးနော်….ဒီမနက်ပဲ ရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုး ခဲ့ပြီ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်….”
ကိုသန်းမောင်က ကောင်မလေးကို မျက်လုံးအသာစွေကြည့်ရင်း ထွန်းလွင်ကို ပြူးပြသည်။ ထွန်းလွင်ကတော့ ပြုံးစ စနှင့် ဦးလေးလုပ်သူကို အပူကပ်နေသည်။
“ အေးငါက ပြောပေးလို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး….မင်း မမကြီးအကြောင်းလည်း သိရဲ့ သားနဲ့ ….ငါလည်း ကြောက်တယ် ကွ မင်းဖာသာ မင်းအမေကိုပြောချေ….ကဲကဲ ငါ့တူမ အထွန်းမိန်းမဆိုတော့…..ငါတို့ တူမပဲပေါ့…..မရှက် နဲ့ အား မနာနဲ့ …….”
ကိုသန်းမောင်သည် ယောက်ျားလေးရှင်ဘက်က ပြောကောင်းလား ပြောမကောင်းလား လည်းမသိ ရင်တွေက လည်း တုန်လျှက် အနေရခက်နေသည်။ ကောင်မလေး ခမျာ သနားစရာလေး။ မျက်နှာလေးကို အိုနေရှာသည်။ ထွန်းလွင်တို့ ရည်းစားထားတာ သူဖြင့် ရိပ်တောင် မရိပ်မိ။ အင်း ဒီအရွယ် မှ အမြီးမပေါက် ဘာမျောက်လဲ လို့သာ ကိုသန်းမောင်တွေးရင်း သက်ပြင်းသာ အသာခိုးချလိုက်မိသည်။ သူသာ ခုထိ ဘာမျောက်မှန်းမသိ ဖြစ်နေ ခြင်းဖြစ်မည်။
ထွန်းလွင် အမေ ဒေါ်တင်တင်လှ ပြန်လာတော့ ကိုသန်းမောင် ထင်ထားသလို ယမ်းပုံ မီးမကျ မဖြစ်တဲ့ အပြင် ဒေါသပင် မထွက် ပဲ သက်ပြင်းလေးချပြီး ကောင်းစွာကိုင်တွယ်လိုက်သည်။ မမကြီး က ပြင်တောင် ပြင်ဆင်ထား ပြီကိုး ဟုလည်း ကိုသန်းမောင် တွေးရင်း စိတ်အေးကာ အနည်းငယ် နေသာသွားသည်။ အမေတွေများ ပြော တော့ သာ မိုးလားကဲလားနဲ့သားမိန်းမ ခိုး လာပြန်တော့လည်း သူ့ သမီးအခိုးခံရတာကျနေပါပဲ။ မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်း စာတာလည်း ဖြစ်ပေမပေါ့ဟုသာ ကိုသန်းမောင်တွေးနေမိသည်။
ဒေါ်တင်တင်လှက ချွေးမလောင်းကို အကဲခတ်ရင်း ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်လိုက်သည်။ ထွန်းလွင် အလှကြိုက် တာ သူသိသည်ပေါ့။ မွေးထားတဲ့ သားပေကိုး။ ကောင်မလေးက နုနုညက်ညက်နှင့် သူ့ ကို မော့မကြည့်ရဲရှာ။ သားမျက်နှာ လှမ်းကြည့်တော့လည်း ခေါင်းငုံ့ ထားသည်။ ထွန်းလွင်က အပြစ်လုပ်ထားရင် ဒီပုံစံပဲဖြစ်သည်ကို ဒေါ်တင်တင်လှ အမေပီပီ သိပြီးဖြစ်လေသည်။ သူ ထအော်ရင်တောင် ထွန်းလွင်ခေါင်း မော့လာမည်မဟုတ်ပေ။
“ကဲ သမီးလေး နာမည်ဘယ်လို ခေါ်လဲ။ ဘာမှ မကြောက်နဲ့ သမီး။ အမေ့ကို ညည်းအမေလို မှတ်ဟုတ်လား….”
ကလေးမလေးက မျက်ရည်စစနဲ့ဒေါ်တင်တင်လှကို ခေါင်းလေးနောက်သို့ အသာရို့ ပြီးကြည့်သည်။ မျက်လုံး မျက်ဖန် ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာအသွင် ကောင်မလေးကို ကြည့်ရင်း ဒေါ်တင်တင်လှ ကရုဏာသက် သွားသည်။ မိန်းကလေး၏ အသံက တိုးတိုးညှင်းညှင်းကလေးထွက်ပေါ်လာသည်။
“အေးအေး သမီးဇင်မာ အမေ့သား မယား ဖြစ်တော့လည်း အမေ့ သမီးပေါ့အေ……စိတ်မပူနဲ့ …သမီး မိဘတွေ ဆီ အမေပြန်အပ်ပေးမယ်….နေ့ ကောင်းရက်သာလေး ရွေးပြီး ညည်းမျက်နှာ မငယ်ရအောင် အမေလုပ်ပေး မယ်။ ဟဲ့ သန်းမောင် သွား…ဦးလှဘော်ကို အကျိုးလေး အကြောင်းလေးပြော ပြထား ညနေခင်းမှ ငါကိုယ် တိုင် လာပြောပါ့မယ်လို့ ….”
ကိုသန်းမောင် ကအစ်မလုပ်သူကို ဘာမှမပြောပဲ အသာ ထိုင်ရာက ထလိုက်သည်။ ထွန်းလွင်က အရင်လို မဟုတ်ဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေသည်။ ကိုသန်းမောင်ကို ပင် စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်၊ အပြစ်လုပ်ထားသူဖြစ် လို့ သူ့ ကိုစကားမပြော ရဲတာပဲလို့ ကိုသန်းမောင် အောက်မေ့လိုက်သည်။
“ ကဲ အထွန်း မင်းမိန်းမရေချိုးဖို့ လုပ်ပေးလိုက်ဦး….သွားသမီး ရေလေးမိုးလေးချိုး….အမေ့အခန်းထဲ သနပ်ခါး တော့ရှိတယ်။ သမီးလိမ်းတတ်ရင် လိမ်းလို့ ရတယ်.. အထွန်း အမေဟင်းချက်ဖို့ ပါရေတစ်ခါတည်း ကဲ့ပေး လှဲ့ ..”
ဒေါ်တင်တင်လှက ရေခပ်ရန်ဆင်းသွားသော သားလုပ်သူကျောကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းအသာချလိုက်သည်။ သားဖြစ်သူ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လာ သောတစ်နေ့ ဒါမျိုးကြုံရဆုံရမည်ကို သူကြိုတွေးထားပြီးသားဖြစ် သည်။ ဒေါသလည်း ဖြစ်မိသည်။ သို့ သော် မိန်းကလေး မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်မိတော့ သူ့ ရင်ထဲတွင် ဒေါသ ထက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ ကရုဏာ စိတ်တို့ သာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မိန်းကလေး ခမျာ သူကသာ ထကြမ်းလိုက် ရင် လင့်တစ်မျက်နှာနဲ့လိုက်လာပြီးကာမှ အခက်တွေ့ မည်ကို ဒေါ်တင်တင်လှသနားသွားမိသည်။ ချက်ဖို့ ပြုတ် ဖို့ ရှိသေးတာကြောင့် မီးဖိုထဲသို့ ဝင်လာခဲ့ ပေမယ့် သူ့ ခေါင်းထဲတွင်တော့ သားနဲ့ သူ့ မိန်းကလေး အတွက် စီ ကာစဉ်ကာ တွေးတောနေမိသည်။
*********************** ********** *********** ***********************
ထွန်းလွင် မိန်းမခိုးလာသည်ကို မမကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိုက် ပုံလေးက လှသည်။ ရပ်ကွက်လူကြီး ဦးလှ ဘော်ကိုလည်း စာချုပ်စာတမ်းတွေ ပြပြီးအကြိုး အကြောင်းတွေပြော၊ ဦးလှဘော်ကလည်း ကောင်မလေး အိမ် လိုက်အပ်ပေးပါမည်ဟု ဆိုတော့ ထွန်းလွင် ကလာတဲ့ ဇာတ်က ပြောရပါလျှင် အိုကေလို့ နေသည်။
မအိုကေ သည်က ထိုညနေခင်း ထွန်းလွင်တို့ လင်မယား လမ်းအလျှောက်ထွက်ချိန်တွင် ကိုသန်း မောင်တို့အိမ်သို့နာဂစ်မုန်တိုင်း ဝင်မွှေ့ ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ခင်သက်ဝေ အဒေါ် ဒေါ်စိန်မြ က ထဘီကိုစွန် တောင်စွဲ လျက် အိမ်ပေါ်သို့ ခြေစောင့်ကာ တက်လာသည်။ ထမင်းစားပြီး၍ ထမ်းလျက်လေး ကိုက်ကာ ထွန်းလွင် အ ကြောင်း တိုင်ပင်နေကြသော ကိုသန်းမောင်တို့ မောင်နှမပင် မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူး ဖြစ်သွားသည်။
“ကဲ တင်တင်လှ ညည်းသား ဘယ်လိုလုပ်သွားတာလဲဟင်….ကောင်းကြသေးရဲ့ လား…..ငါနဲ့ တော့ရှက် လည်း ရှက်ပါ့တော်……ခု...သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား တဲ့ အကောင် ဘယ်မလဲ….ဟင် …”
“ အလိုတော် မစိန်မြ ရှင်က အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ကျုပ်သားကို စော်စော်ကားကား….ရှင် ကောင်းကောင်း မွန်မွန်ပြောစမ်းပါ ကျုပ်သား….ကဘာဖြစ်နေလို့ လဲ……”
“ ဘာဖြစ်ရမလဲ….ညည်းသားပေါ့…..ကျုပ်တူမကတော့ ထွန်းလွင်…ထွန်းလွင်နဲ့ ….ပါးစပ်ဖျားကမချ ဖူးဖူး မှုတ် ထားတာ…..ခုတော့ဒင်းက ကျုပ်တူမကို ထားပြီး မိန်းမတောင်ခိုးသွားလိုက်သေး…..ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဟိုမှာ ကျုပ်တူမခင်သက်ဝေ တငိုငိုတရီရီနဲ့ ……အဲတာ ညည်းသား ထွန်းလွင်ကြောင့်ပေါ့….”
“အလိုတော်…..ရှင့်တူမ ခင်သက်ဝေက ကျုပ်သားကို…..ဟင်း ကျုပ်သား နုနုထွတ်ထွတ်ကလေးက ရှင့်တူမလို ခုနှစ်အို ရှစ်အို ကိုကြိုက်မတဲ့ လားတော် စဉ်းစဉ်းစားစားလေးလည်း ပြောပါဦး မစိန်မြရယ်…..ဒီမှာ လူကြားမ ကောင်းတာတွေ လာမပြောစမ်းပါနဲ့ တော်….ကျုပ်သားကခု မိန်းမရနေပြီ….ရှင်ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ…”
“အေး အဲတာငါမသိဘူး…သန်းမောင်နင့်တော့ ငါအားနာပါတယ်….ဒီမယ် တင်တင်လှ….နင့်သားက ငါ့တူမကို ဒီအတိုင်းထား သွားတာမဟုတ်ဘူးဟေ့….ဟိုမှာဗိုက်က သုံးလရှိနေပြီ…..အဲတာကြောင့် ဒင်းကို ငါလာရှာတာ ပေါ့….ဟဲ့ တင်တင်လှရဲ့ …..”
မမကြီး ငြိမ်သွားသည်။ ကိုသန်းမောင် ကတော့ အကြမ်းပန်းကန်လုံးလေး ကိုကိုင်ပြီး ရေနွေးသောက်နေရာက နားထင်ကို သွေးပင်တက် ဆောင့်လို့ သွားသည်။ ခင်သက်ဝေ အဒေါ်က အရှက်ကွဲခံပြီးတောင် လာပြောမှ တော့ ဟုတ်များဟုတ်နေပြီ လား။ ဟုတ်ပေလို့ ပဲ ဒေါ်စိန်မြကြီး ဒေါသတွေထွက် တစ်ရှက်ကနှစ်ရှက် အ ကွဲခံကာလာပြောလေသည်ပေါ့။ ကိုသန်းမောင် အတော်ပင်ချွေးပြန်နေပြီ ဖြစ်သည။ မျက်လုံးထဲမလဲ ခင်သက် ဝေ ကို မြင်နေမိသည်။ တူလုပ်သူ ထွန်းလွင်ကတော့ ဘယ်သို့ သောဘွဲ့ မျိုးထပ်ပေးရမည်ပင် သူမသိတော့……
အံ့သြလို့ ခဏငြိမ်သွားသော ဒေါ်တင်တင်လှ ကချက်ချင်းပင် သတိဝင်လာပြီး ဒေါ်စိန်မြကို ပြန်ပက်လိုက်သည်။
“ အလိုတော် ရှင်တူမဖာ သာ ဘယ်ကလူနဲ့ ရမှန်းမသိတဲ့ ဟာကို ကျုပ်သားကို စွပ်စွပ်စွဲစွဲတော် ဒီမယ်မစိန်မြ…. ကျေနပ်တုန်း ကတော့ ဘာသံမှမကြားရဘဲ….ခုမှ ဘာမှပြောမနေနဲ့ တော့ ….ကျုပ်သားက ခု တရားဝင် မိန်းမ နဲ့ ဖြစ်နေပြီ…..ရှင်တို့ အထုပ် ရှင်တို့ ဟာရှင်းတော်…..ကျုပ်အိမ်ပေါ် တက်ပြီး စော်ကားမော်ကား လာမလုပ်နဲ့ရှင်ပြန်တာကောင်းမယ် မစိန်မြ……ကျုပ် ရုံးရောက် ဂတ်ရောက် မဖြစ်ချင်ဘူး……ကျုပ် တို့ သားမင်္ဂလာယူ နေ တာ ရှင်တို့ အရှုပ်ထုပ်တွေ အိမ်ပေါ်ဆွဲမတင်လာပါနဲ့ ….”
ဒေါ်တင်တင်လှ ကချွေးမလုပ်သူကို ပြောတုန်းကတော့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ယောက္ခဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် ဒေါ်စိန်မြ အ ပြောမ တတ်လို့ ရယ်ပဲလား မသိ သူရန်တွေ့ နေပုံက ကိုသန်းမောင်ပင် အံ့သြမိသည်။ မိန်းမတွေ သည် မျက်နှာဖုံး အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းတတ်နိုင်ကြသည် ဟုလည်း တွေးနေမိသည်။ ထွန်းလွင် ကတော့ ကိုသန်းမောင် ဆလံလဲ ပေးသည် လက်လည်းမြောက်သည်။ ဒီကောင် လူကြည့် တော့ ခပ်အေးအေးနဲ့ ။
“ တင်တင်လှ ညည်း တရားလက်လွတ်မပြောနဲ့ ……ငါတို့ မိန်းကလေးရှင်ဘက်လည်း နည်းနည်း ငဲ့ဦးမှပေါ့ ငါ့ တူမ နင့်သားနဲ့ မဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ ဖြစ်ရမလဲ။ ထွန်းလွင် ငါတို့ အိမ်ဝင်ထွက်နေတာ တစ်ရပ်ကွက်လုံးသိတယ်။ နင်မသိဘူးလား တင်တင်လှရဲ့ …နင့်မောင် ကို မေးကြည့်ပလား…..”
ဒေါ်စိန်မြ လေနည်းနည်းပျော့သွားသည်။ မတ်ရပ်နေရာက ဒေါ်တင်တင်လှရှေ့ ကုလားထိုင်တွင် ဒေါ်စိန်မြထိုင် ချလိုက်သည်။ ဒေါ်စိန်မြ မျက်နှာက အပူရုပ်ကို ကိုသန်းမောင် တွေ့ လိုက်ပါပြီ။ ဒါလုပ်ဇာတ်မဟုတ်တန်ရာဘူး ဟုလည်း ယုံလိုက်မိသည်။ ထွန်းလွင်တို့ ရိုက်ချက်က အပြင်းသား။ ခင်သက်ဝေ တစ်ယောက်တော့ တော်တော် လေး အရှက်ရ နေတော့မှာ ပါလားဟုလည်း တွေးနေမိသည်။
“ ကျုပ်သားကို ခေါ်ခေါ်ခိုင်းနေတာ မသိဘဲရှိမလား…ကျုပ်အပေါက်ဆိုးတယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောဘဲနေတာ…. ရှင်က ကိုယ်တူမ ကိုယ်ထိန်းပေါ့….ခုတော့ ကျုပ်က ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ မစိန်မြရဲ့ …..ဟိုမှာ ကျုပ်အိမ်ပေါ်မှာ ကောင်မလေးရောက်နေပြီ…..သူတို့ ကို မယူနဲ့ သွားဆိုပြီး… နှင်ချလို့ ရမလား…..ခက်တော့တာပဲ….”
“ဟဲ့….နင့်သားကို လူကောင်းလေး မှတ်လို ၊့ယုံကြည်မိလို့ ခုလိုဖြစ်ရတာ….ဘယ်နှယ်တော် ယောက်ျား ပဲကိုယ် ရှုပ်တဲ့ အထုတ်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူရမှာပေါ့……ဝင်ထွက်စားသောက်နေတဲ့ အိမ်က မိန်းကလေးကို ဒီလို လုပ် တာ…. သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားတာပေါ့ဟဲ့…..”
“အလိုတော် မစိန်မြ ရှင် ပြန်ရင်ကောင်းမယ်နော်…….ရှင်တို့ ကကျုပ်သားကို ခိုင်းခိုင်းပြီးစားနေတာလေ…ဘာခု မှ ဘာမျက်ကလဲဆန်ပြာ ဖြစ်နေရတာလဲ …..ဒီမှာ ကျုပ် ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောမယ်….ရှင်တို့ဖသာရှင်တို့ကြိုက်သ လိုလုပ် ကျုပ်ကတော့ မနက်ဖြန် ကောင်မလေး အိမ်ပြန်အပ်ပြီး ပေးစားတော့မယ်….ဒီမှာ ထွန်းလွင်က ရုံးမှာ တောင် တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီ…..ကျုပ်တော့ ဘာမှ မတတ်နိုင် ဘူးတော်ရေ …..ထွန်းလွင် ….ထွန်းလွင် … နင်တော် တော် မွှေပါ့လား…တကယ့်စနေ ဂြိုလ်ကောင်………..”
“ အလိုတော်….ကောင်းကြသေးရဲ့ လား ….အေးလုပ်ပေါ့ဟယ် နင်တို့ ပြုသမျှခံရတော့မှာ ဆိုတော့ …..အေးဒီ အ တိုင်း တော့ ငါတို့ က ခေါင်းငုံ့ မခံနိုင်ဘူး…..ဒီမှာ တင်တင်လှ ညည်းသားကို ရုံးကနေ စကားပြောမယ် ….. ကျုပ်တူမ အတွက် စဉ်းစားရင် စဉ်းစား မစဉ်းစားရင်တော့ သည်း… ရုံး လိုက်ရမယ်သာမှတ် …..သွားမယ်….”
“တိုင်တော် တိုင်တိုင် ရုံးမကလို့ ကြိုက်တဲ့ နေရာတိုင်။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါတော် …..အော် ဟော် ….မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးလေး လာစားလှည့် ဦးနော်….ခုကတည်းက…တစ်ခါတည်းကြိုဖိတ်ထားတာ…..”
ဒေါ်တင်တင်လှ ၏အငေါ့ စကားကို လှည့်နားမထောင်တော့ပဲ ဒေါ်စိန်မြတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်မှ ကဆုန်ပေါက် ဆင်းသွား သည်။ ကိုသန်းမောင်ကတော့ ဘာမှလည်း ဝင်မပြောရဲ၊ ဝင်လဲမပြောဘဲနဲ့ရင်ထဲ တွင် လေးပင်လို့လာသည်။ သူတို့ စကားတွေများ ကြားလို့ မှ နားမချမ်းသာပါ့လား ဟုလည်း တွေးကာ ရှက်မိ သည်။ ဒီအဖွား ကြီး နှစ်ယောက် ပြောနေလိုက်ပုံက ရစရာကို မရှိတော့ပေ။ သူ့ အစ်မကိုလည်း သူပိုလို့ အံ့သြမိသည်။
ချွေးမလေးကျတော့ အပြောကချိုသာသလောက် ခင်သက်ဝေကိုကျတော့ ဒေါ်တင်တင်လှ ပြောနေပုံမှာ ဖြစ်ချင် ရာဖြစ် ဂရုမစိုက်သည့်သဘော ဖြစ်နေသည်။ သူ့ အစ်မပြောတာလွန်များ သွားသလားဟု ထင်မိသည်။ သို့ မ ဟုတ် အသည်းစား ဘုရင်မကြီးခင်သက်ဝေပင် ဝဋ်ကြမ္မာတစ်ပတ် ပြန်လည်လေ သလားတော့ မပြောတတ်။ ဝဋ်လည် စေဦးတော့ ဒီလို မျိုးကြီးကျတော့ ခင်သက်ဝေ အတော် သနားစရာကောင်းတာပဲလေ။ မိန်းမဆိုတာ ဘယ်လောက်ချောချော၊ ဘယ်လောက်လှလှ၊ ဘယ်လောက်ပင် မာနတွေ ကြီးကြီး၊ ဖြစ်တဲ့ အခါ နာစရာရှိ သူ တို့ ပဲ နာ ကြရတာ ပါလား ဟုလည်း တွေးနေမိသည်။
ခင်သက်ဝေကို ထွန်းလွင်နှင့်တွဲမြင်လို့ မရသော်လည်း ခုလို ကြားရတော့ ကိုသန်းမောင်စိတ်မကောင်းပေ။ သို့သော် သူ့ ၌ကိုယ်လေးလက်ဝန် ရှိသည့်တိုင် အောင် ခင်သက်ဝေတို့ များ မိုက်ချက်လို့ လူကြီးတစ်ယောက် လို ကိုသန်းမောင် စိတ်ထဲက ပြောလိုက်မိသည်။ မိန်းမယောက်ျားဆိုတာ သွေးမတော်သားမစပ် ရင် တစ်မိနစ် တောင် အတူမထားကောင်း ပါလားဟုလည်း တွေးမိပြန်သည်။ ထွန်းလွင်က ကိုယ့်တူမို့ သာပေါ့ ဒီနေ ရာမှ ကိုယ့် တူမသာ အဲလိုဖြစ်နေရင် သူ တော့ရှက်လို့ သေမှာပဲဟုလည်း စာစာနာနာလေး တွေးလိုက်မိသည်။
ထွန်းလွင်က လူငယ်ဆိုတော့လည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ တွေးနေမည်မဟုတ်ဆိုတာ ကိုသန်းမောင်နားလည် သည်။ သူတို့ လို အရွယ်လွန်ခဲ့ တဲ့သူတွေသာ တွေဝေမှုတွေနှင့် အချိန်တွေကို ကုန်လွန်ခဲ့ လေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုသန်းမောင် ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်တင်ရမည် မသိ။ ထွန်းလွင်လား၊ ခင်သက်ဝေလား၊ ရင့်ရင့်သီးသီးပြောလွှတ် သည့် အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်လှလား၊ ကိုယ်ကနာနေသည်ပင် အထက်စီးက ကြမ်းချင်သေးသည့် ခင်သက် ဝေ အဒေါ်ကြီး ဒေါ်စိန်မြလား၊ ကိုသန်းမောင်မသိ။ ဒီအထဲ သနားစရာကောင်းတာက ခင်သက်ဝေနှင့် ထွန်းလွင် မယားလေး ဇင်မာအေး။
ဇင်မာအေးများ ဒါကိုသိရင် ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်း လေမလဲ။ မြန်မာမိန်းကလေးများ သူတို့ ရည်းစားဒါမျိုး လား ဆိုလျှင် အလွန် အခံရခက်တတ်သလို ဒေါသလည်းကြီးတတ်ကြသည်။ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေး ဆိုလို့က တော့ အတိုင်းထက်လွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားဖြစ်မည်။ သို့ သော်ရုံးရောက် ကန္နားရောက်ဆိုလျှင် သူမ ပါ ရော အရှက်ကွဲဦး မည်။ ခွင့်လွှတ်ရန်တော့ လမ်းမမြင်။ ခိုးရာလိုက်လို့ အရှက်က တစ်ခါကွဲ၊ လင်လုပ် သူ ရဲ့ အရှုပ်ကြောင့်ပါ နောက်တစ်ခါ ထပ်အရှက်ကွဲရရင်တော့။ ကိုသန်းမောင်သည် နဂိုကတည်းက ဒေါင့် စေ့ အောင်တွေးကာ ပူတတ် သူမို့ ရယ်မသိ တွေးရင်းက ခေါင်းတွေပင် ရှုပ်လာတော့သည်။
ကိုသန်းမောင် အတွေးတွေ အကုန်မမှန်သည့်တိုင် တစ်ဝက်တော့ မှန်သည်။ ထွန်းလွင်ကိုလည်း ခင်သက်ဝေက တရားမစွဲပါ။ သို့ သော် ထွန်းလွင် မင်္ဂလာဆောင်မတိုင်မီပင် ခင်သက်ဝေတို့ တူဝရီး ပျောက်သွားသည်။ ငယ် စဉ်တုန်းက အလှမာန်တွေတက်ကာ နေခဲ့ သော ခင်သက်ဝေသည် တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက် အကွဲမခံတော့ ပဲ မွေးရပ်ကိုပင် စွန့် သွားခဲ့ ရသည်။
ထွန်းလွင် မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ရ၍ များမကြာမီ ခင်သက်ဝေ ဆုံးသောသတင်းကို ကြားရသည်။ ကလေး အသေက လေး မွေးလို့ မီးတွင်းထဲတွင်ပင် သွေးတက်၍ ဆုံးရှာသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကိုသန်းမောင်ကတော့ မမြင်လိုက်ရ သော ထိုကလေးသည် ယောင်္ကျားလေးလော မိန်းကလေးလော ဟုသိချင်နေခဲ့ သည်။ ထိုကလေး သည် သူ့အတွက် တူကမွေးသော မြေးဦးကလေး ဖြစ်သည်။ ထွန်းလွင်ကတော့ ခင်သက်ဝေကို သတိပင်ရဟန်မတူ။ သားသမီးကိုတော့ ဝေးရော။ တူဝရီးချင်း မို့ တစ်ခါက မေးဖြစ်ခဲ့ သေးသည်။
“အထွန်း မင်း ခင်သက်ဝေကို သတိရသေးလား…”
“ အင်….မမသက်ဝေလား……ကျန်ခဲ့ ပါပြီဗျာ….သတိရတော့ကော ဘာထူးမလဲ လေးသန်းရဲ့ ။ မိန်းမ ကိုတောင် မနည်း ချော့ ပြီး တောင်းပန်ထားရတာ…..လေးသန်းရာ…ဟားဟား…..”
ထွန်းလွင် ရယ်လိုက်တော့ ကိုသန်းမောင်ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားမိသည်။ ထိုအချိန်က ခင်သက်ဝေတစ် ယောက် ကိုယ်လေးလက်ဝန်ဖြင့် မည်မျှဒုက္ခရောက် နေခဲ့ သည်မသိ။ ကိုယ့်သွေးကိုယ့်သားရယ်ဟူသော အသိ ထွန်းလွင်မှာ ရှိမှရှိပါလေစ။ ခုတော့ ခင်သက်ဝေလည်း ဆုံးပြီ။ ထွန်းလွင်သား၊ သူ့ မမြင်လိုက်ရသော မြေးဦး လေးလည်း ဆုံးပြီ။ ဒီကလေး လူမဖြစ်လာတာ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ် ဟုလည်း ကိုသန်းမောင် မတွေး ကောင်း တွေးကောင်း တွေးမိပြန်သည်။ ထွန်းလွင်ဆိုတဲ့ သူ့ တူဘာလို့ များ ဒီလောက် အသည်းမာရသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ မှာ နှမမရှိ လို့ များ မစာနာလေရော့သလား ကိုသန်းမောင်မသိ။
ဒီလိုနဲ့ ထွန်းလွင် မယားဇင်မာအေး ဒုတိယမြောက်ကလေး မွေးပြီးသိပ်မကြာခင် ထွန်းလွင်ဇာတိက ပြပြန်လေ သည်။ အိမ်ထောင်သက် လေးငါးခြောက်နှစ်ပဲရှိသေးသည် အငယ်တစ်ယောက်နှင့် စခန်းသွားနေသည်မို့ ဇင်မာ အေးခမျာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ဖြစ်ရပြန်သည်။ အရှာလေးကကောင်းတော့ ငွေကလေးက လည်းရွှင်သည်မို့ထွန်းလွင်တစ်ယောက် မင်းတုန်းမင်းဇာတ် ခင်းပြန်လေသည်။
အိမ်ပေါ်သို့ ခေါ်တင်မလာသည်ကို ပင် မောင်မင်းကြီးသာ ကို ကျေးဇူးတင်ရမလို ရှိသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ဘဲ အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်လှ ဆုံးရှာသည်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အစ်မ ဟိုကောင်မလေး မိဘတွေဆီလိုက် မအပ် နိုင်ရှာတော့။ လင်ဆိုးမယား တဖားဖား ဆိုသကဲ့ သို ဇင်မာအေးမလဲ ကလေး နှစ်ယောက်နှင့် သူ့ မိဘအိမ်ပြန် သွားတော့ ဤအိမ်ကြီးတွင် ကိုသန်းမောင်ကြီးတစ်ယောက်သာ ငုတ်တုတ်ကျန်ခဲ့လေသည်။ တရားတွေလည်း ကျလှပြီ။ သေတဲ့ လူတွေကလည်း သေကုန်ကြပြီ။ ကွဲတဲ့ သူတွေကလည်း ကွဲကုန်ကြပြီ။
ဇင်မာအေး အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး ခြောက်လလောက် ကြာတော့ ထွန်းလွင် အိမ်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာသည်။ ဇင် မာအေးရုပ်နဲ့ ကောင်မလေး နောက်တစ်ယောက်က ထွန်းလွင်နောက် ဖဝါးခြေထပ်လိုက်လို့ လာသည်။ ထွန်း လွင် မျက်နှာကို ကိုသန်းမောင်ကြည့်ရသည်မှာ တူအရင်းမို့ ရင့်ရင့်သီးသီး မပြောချင်သော်လည်း တိရစ္ဆာန် ရုပ် တော့ထွက်နေတာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ နဂိုအသားဖြူဖြူတွင် နီစပ်စပ်ဖြစ်နေသော ထွန်းလွင်မျက်နှာ နှင့် သူ့ မျက်လုံးက တောက်နေသော အရောင်တွေကို ကိုသန်းမောင်မကြိုက်။
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့လူဖြစ်လာသော ထွန်းလွင်တွင် ဒီလိုဥာဉ်ဆိုးတွေ ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသက ရောက်လာ လေ သလဲ ကိုသန်းမောင်မသိ။ ဇင်မာအေးနှင့် မြေးငယ်နှစ်ယောက် မျက်နှာလည်း မြင်ယောင်မိသည်။ သွားလေ သူ အစ်မကြီး ဒေါ်တင်တင်လှ မျက်နှာကိုလည်း ကိုသန်းမောင် မြင်ယောင်မိသည်။ ဒင်း ထောက်စရာ မအေ့မျက်နှာ လည်းမရှိတော့ပြီ။ မယားကြီးကလည်း ကလေးနှစ်ယောက် ပိုက်ကာ အိမ်ပေါ် က ဆင်းသွားပြီ။ ကိုသန်းမောင် ထွန်းလွင်ကို ဘာပြောနိုင်မည်နည်း။ ထွန်းလွင်ကို သူ့ တူလို့ ပြောရမှာပင် ရှက်လာမိသည်။
သို့ သော် ဒီတစ်ခါတော့ထူးဆန်းသည်။ ထွန်းလွင် ယူလာသော မိန်းမလေးက သူကို “ဦး” ဟုခေါ်လိုက်လျှင် ဇင်မာအေးခေါ်သလို နားထောင် လို့ မ တော်ပေ။ ဒီအသံကို ကိုသန်းမောင် မကြိုက်။ အီတာလား အူတာ လား တော့ ကိုသန်းမောင် မပြောတတ်။ ကောင်မ လေး ရယ်သံက အဖျားခါလျှက် တုန်တုန်၍ပင် သွားတတ် သေး သည်။ မယားငုတ်တုတ်နှင့် သားသမီးတွေရှိသော ယောက်ျားကို မျက်နှာပြောင်ပြောင်နှင့် ယူရဲသော မိန်းက လေး သည် မည်သို့ သော မိန်းကလေးမျိုး ဖြစ်သည်ကို ကိုသန်းမောင် ဆန်းစစ်စရာ တွေးကြည့်စရာပင်မလိုပေ။ သူသာ ထွန်းလွင်လို ကောင် ဖြစ်ရင် တော့ ဤအိမ်ပေါ်တွင် ကြားမကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာ ပေ လိမ့်ဦးမည် ဟု ကိုသန်းမောင် တွေးလိုက်မိလေသည်။
*********** ********** ********** ********** *********** ********** ******
ကျွန်တော့်ရဲ့“ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း” ဘလော့လေးကို လာလည်တဲ့ အတွက် အရမ်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်....ကျွန်တော့်ရဲ့ မတတ်တတတ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို ဝေဖန်ပေး သွားရင် တော့.... အတိုင်း ထက်လွန် ပါပဲဗျာ....ပြောမပြနိုင်အောင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
Posted by yangonthar at 2:46 AM
အစ်ကို ရေ ဘလော့တစ်ခု ဖွင့်ပြီး ရေးဖြစ်ပြီဆိုတာ သိရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ခင်ဗျာ။ အမြဲလာအားပေး ပါ့မယ်၊ အသစ်တင်တိုင်း လာဖတ်ရအောင် Google Friend Connect ကနေ follow လုပ်ခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့် ဘလော့မှာလည်း link ချိတ်ထားပါ့မယ်။
ထွန်းလွင်လို လူမျိုးကို သတ်ပစ်ချင်တယ်။ အဆုံးသတ်မှာ... ဝဋ်လည်တာ ကို ပြသင့်တယ်ထင်တယ်နော်..။
စာရေးသူကို ဆရာ လုပ်တာမဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူ ဖြစ်ချင်တာကို တင်ပြတာပါ။ ဟီး
မြတ်နိုးပြောသလို တခုခုတော့ ၀ဋ်လည်သင့်တယ်
ဒါပေမယ့် နောက်ယူတဲ့ မိန်းကလေး ရီသံတွေ ကြားတာနဲ့ လည်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ် .. :D
ဒီကလည်း မတတ်ပဲ ဝေဖန်သွားပါ၏ :D